Nagarik News - ध्रुव दंगाल
दंगाल सिन्धुपाल्चोकस्थित नागरिक संबाददाता हुन्। दस वर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय दंगाल नागरिकमा स्थापनाकालदेखि आबद्ध छन्।
फेसबुक : https://www.facebook.com/dhruba.dangal
ट्विटर : https://twitter.com/dhrubadangal
सिन्धुपाल्चोक- कालु तामाङ तातोपानी बसेर मजदुरी गर्थे। उनको गाउँ कागुनेमा कोदो रोप्ने चटारो थियो। खेताला नपाएर आजित पत्नीले राति सुत्ने बेलामा उनलाई फोनबाट गुनासो गरिन्। कालुले बिहानै कोदो रोप्न आइपुग्ने बचन दिए। घर फर्कने तयारीसाथ सुतेका उनको निद्रा उज्यालो नहुँदै खलबलियो। जुरे पहिरोले कागुने गाउँ बगाएर सुनकोसी नदी थुनिएको अप्रिय खबर उनको कान ठोक्कियो।
सिन्धुपाल्चोक–हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर एकीकृत बस्ती निर्माणमा जुटेका छन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको अगुवाइमा बुधबारदेखि घर निर्माण कार्य थालिएको हो । धुर्मुस–सुन्तली स्वयं ढुंगा बोकेर स्थानीयसँगै घर निर्माणमा जुटेका छन् । भूकम्पको वर्ष दिनमा वैशाख १२ गते एकीकृत बस्ती निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोक- भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोक पुनर्निर्माणमा सघाउन सवा तीन सयभन्दा बढी प्राविधिक खटिने भएका छन्। भूकम्पपीडितलाई पुनर्निर्माणमा मद्दत पुर्यानउन सरकारले तीन सय ३३ दरबन्दी सिर्जना गरी प्राविधिक पठाउन थालेको हो। सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय गर्दै उनीहरूले पीडितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर घरसंरचना निर्माणमा सघाउने छन्।
सिन्धुपाल्चोक- भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको अवलोकन भ्रमणमा आएका संयूक्त राष्ट्र संघका नायब महासचिव जान एलियासन आइतबार जिल्ला अस्पताल पुग्दा भावुक देखिए। क्षतिग्रस्त भवन छेउ खुला जमिनमा टेन्टमा सञ्चालित अस्पताल उनले गहिरो गरी नियाले।
सिन्धुपाल्चोक-संयूक्त राष्ट्र संघका नायव महासचिव जान एलियासनले नेपालको पुनर्निर्माणमा सघाउन अन्तराष्ट्रिय जगतलाई आग्रह गरेका छन्। गत वर्ष वैशाख १२ को भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको आइतबार अवलोकन भ्रमण गर्दै उनले विपत्तिमा सबै एकै ठाउँमा जुट्नुपर्ने बताए।
१८ किलो सुनसहित तीन जना पक्राउ
सिन्धुपाल्चाेक- सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा शुक्रबार अपरान्ह १८ किलो सुनसहित तीन जना पक्राउ परेका छन्। तातोपानीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा९च १४६३ नम्बरको गाडीमा सुन भेटिएको सिन्धुपाल्चोकका एसपी रविन्द्र केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार गाडीको डिकीमा सुन लुकाइएको थियो।
भूकम्प पीडितका प्रश्नै प्रश्नले घेरिए सिडिओ
25 Apr 2016 | सोमबार १३ बैशाख, २०७३
नवलपुर (सिन्धुपाल्चोक)-'सिडियो साहेब! पालमूनि बसेको वर्ष बित्यो। बर्खामा रुझ्दै भलबाढी सोहोर्यौँ। जाडोमा शीतले भिज्यौँ। अब कति पालमै राख्नु हुन्छ?' भूकम्प पीडितका पीडा र समस्याका चाङ लगाउँदै बाँडेगाउँ–२ का पुण्यप्रसाद आचार्यले प्रश्न गरे।
सरकारको तयारी कमजोर
सिन्धुपाल्चोक- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाधिक क्षतिग्रस्त जिल्ला सिन्धुपाल्चोकबाट पुनर्निर्माण अभियान थालनी गरे पनि पीडितले बेलैमा घर पाउने सम्भावना भने छैन। सरकारी ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रियाले पुनर्निर्माण थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
सिन्धुपाल्चोकः ११ः५६ समय रोजेर प्रधानमन्त्रीले पीडितको नयाँ घरमा जग हाले
24 Apr 2016 | आइतबार १२ बैशाख, २०७३
सिन्धुपाल्चोक–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौताराबाट भूकम्प पुन निर्माण अभियान सुरु गरेका छन्।